Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Qatar Duty Free manokatra an'i Polo Ralph Lauren ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hamad
Qatar Duty Free (QDF) dia faly manambara ny fisokafan'ny fivarotana antsinjarany farany ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena (HIA) Hamad - Polo Ralph Lauren. Ity fanampim-panazavana farany ity dia manatsara ny portfolio QDF manitatra, izay misy ankehitriny mihoatra ny 90 amin'ireo marika manintona indrindra eran'izao tontolo izao izay hita ao amin'ny seranam-piaramanidina kintana dimy an'i Qatar, manome ny mpandeha ny traikefa farany miantsena.
Ilay fivarotana vaovao vaovao Polo Ralph Lauren dia manasongadina ny fisafidianana ireo entana tena tadiavin'ny marika, ao anatin'izany ny fanangonana akanjon-dehilahy sy fanangonana fanatanjahan-tena, ary koa kojakoja sy valizy. Misy lobaka Polo isan-karazany ihany koa ao amin'ny magazay manomboka amin'ny fanangonana Polo Ralph Lauren ho an'ireo mpandeha manao ny diany mamaky ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hamad izay nahazo loka.
Ny filoha lefitra zokiny ao amin'ny Qatar Duty Free, Andriamatoa Luis Gasset, dia nilaza hoe: “Faly izahay manampy an'i Polo Ralph Lauren amin'ny portfolio-n'ny varotra manitatra ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Hamad. Polo Ralph Lauren dia marika tsy manam-potoana sy mahazatra, manome vokatra kalitao sy tena izy - mety tsara amin'ny portfolio-n'ireo marika lafo vidy ankehitriny azon'ny mpandeha rehetra miantsena ao HIA. Polo Ralph Lauren dia marika manerantany eran'izao tontolo izao, ary tsy isalasalana fa ho mahasarika olona rehetra amin'ny mpandeha eto amintsika izany, na mitsabo tena, na mividy fanomezana ho an'ny olon-tiany. ”
Ny fisokafan'ny Polo Ralph Lauren dia taorian'ny fanombohana fivarotana vao haingana tao HIA, ao anatin'izany ny sampana fahatelo amin'ny fivarotana volamena, ary ny fanokafana ny fivarotana zava-manitra britanika Penhaligon's - fivarotana voalohany indrindra any Qatar. Ireto fisokafana fivarotana ireto farany dia ampahany amin'ny ezaky ny QDF tsy tapaka hanomezana traikefa kintana dimy tsy hay hadinoina tao amin'ny seranam-piaramanidina nahazo loka.
Amin'ity taona ity, mankalaza 50 taona ny famoronana lamaody mampiavaka an'i Ralph Lauren izay maneho ny hakantony maoderina sy ny rendrarendra. Ny fahitan'ny marika dia tsy ny famoronana lamaody fotsiny, fa ny fananganana fomba fiaina izay mihoatra ny fironana, mamorona tontolo ary mitaona ny olona handray anjara amin'ny nofinofin'ilay marika.
QDF dia manolotra 40,000 metatra toradroa fivarotana fivarotana, sakafo sy zava-pisotro miaraka amin'ny HIA, mametraka ny mpivarotra ho toerana fivarotana sy fisakafoanana voalohany. Miaraka amina fivarotana antsinjarany maherin'ny 90 izay manolotra fisafidianana marika marika, lamaody, elektronika, sakafo gourmet ary zavatra maro hafa mbola tsy nisy toy izany, ny QDF ao amin'ny HIA dia miatrika ny filana sy ny filàna rehetra. Ho fanampin'izany, kafe sy trano fisakafoanana mihoatra ny 30 no manolotra safidy mahaliana amin'ny sakafo eran-tany sy eo an-toerana.
Ilay mpandraharaha maimaimpoana mandray andraikitra maimaimpoana ary nahazo loka dia nahazo fitomboana isa indroa isan-taona isan-taona ary izy izao no mpandraharaha tsy andoavana adidy faharoa lehibe indrindra any Moyen orient. Ny marika lafo vidy izay misy ihany koa ao amin'ny HIA dia ahitana an'i Bulgari, Hermès, Giorgio Armani, Hugo Boss, Mont Blanc, Rolex ary Chanel.